Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Cunard dia nanambara ny fahavitan'ny fanavaozana ny vola $ 40 tapitrisa an'ny Mpanjakavavy Victoria
Jona 9, 2017
Ny sambo malaza an'i Cunard, Queen Victoria, dia niverina fatratra tany Southampton omaly, nampiseho endrika vaovao mahavariana taorian'ny fanavaozana nahagaga $ 40 tapitrisa.
Ny sary nalaina voalohany navoaka androany dia mampiharihary ny vokatry ny asan'i Cunard, manomboka amin'ny fanatsarana lehibe hatramin'ny antsipirihany misimisy, ny fitandremana sy ny fahazotoana tsy azo sitranina natao mba hiantohana ny mpandeha amin'ny traikefa lafo vidy indrindra hatramin'ny fotoana niakaran'izy ireo an-tsambo.
Ny famolavolana anatiny tsara tarehy dia misongadina an-tsehatra ao amin'ny Britannia Club Restaurant vaovao ary manohy mandresy ao anatin'ny staterooms Britannia Club vaovao 43 midadasika. Ny fanatsarana bebe kokoa an-tsambo dia ahitana ny Grand sy Penthouse Suites voadio tsara sy nohavaozina, ary koa ny tokotanin'ny masoandro vaovao mirindra izay manome toerana sy fiadanam-po ary zaridaina ririnina mahatalanjona. Ny stateroom rehetra dia namelombelona, ​​ao anatin'izany ny fametrahana fahitalavitra fisaka lehibe sy fotodrafitrasa fanaovana dite sy kafe.
Ny sambo mpitondra fanjakana, izay nesorina tamin'ny serivisy tamin'ny 5 Mey mba hitrandrahana refy ao amin'ny Fincantieri Shipyard any Palermo any Italia, dia niverina niasa tamin'ny fomba milay omaly, ary niainga tamin'ny fitsangatsanganana voninkazo nankany amin'ny Nosy Canary, ao anatin'ny Fetibe manokana ny dia voninkazo.
"Ny fampiasam-bola mitentina 172 tapitrisa dolara ho an'ny refit an'ny Queen Victoria miaraka amin'ny famerenan'i Queen Mary 2 indray dia porofon'ny fanoloran-tenan'i Cunard an'ireo sambo malaza sy manatsara ny traikefan'ny mpandeha anay," hoy i Josh Leibowitz, filoha lefitra ambony, Cunard Amerika Avaratra. "Miaraka amina endrika vaovao sy fanatsarana ny fanomezana eny an-tsambo, Vonona ny handeha an-tsambo ny taranaka manaraka an'i Cunarders i Victoria Victoria izay manome diany tsy manam-paharoa."